မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Population အများဆုံး wow online game server - MYSTERY ZILLION
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Population အများဆုံး wow online game server
August 2010 edited September 2010 in Internet & Email
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Population အများဆုံး wow online game server မှာ၀င်ရောက်ကစားရန ်free အကောင့်များကို www.vakok.net တွင် အခမဲ ့ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Population အများဆုံးဆိုတော့ တစ်ခြား wow private server တွေ ရှိသေးလို့လားဟင်။
ArcEmu နဲ့လား Mangos လား။ မြန်မာနိုင်ငံ အပြင်ကနေရော ၀င်ဆော့လို့ ရလားဟင်။
jellygynn wrote: »
တခြားဘာ ဆိုဒ်တွေရော ရှိသေးတုန်း bro: အွန်လိုင်းက torncity လိုဝင်ဆော့ရမှာလား သူငယ်ချင်းတွေကိုရော invite လုပ်ပီးဖေ့ဘွတ်က ဂိမ်းတွေလို social game , strategy game , simulation game တွေရောပါလား thx ::
[FONT="]Sorry ပါဗျာအခုမှ ပြန် reply လုပ်ဖြစ်တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ဒီဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကို kreatorye နဲ ့ကို Mtk13 တို ့မေးတာကိုပြန်ဖြေရရင်[/FONT]
[FONT="]လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို ့မြန်မာနိုင်ငံ မှာ online ကနေ ကစားလို ့ရတဲ့wow private server[/FONT]
[FONT="]4 ခုလောက်ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့server တွေအကြောင်းကိုတော့သိပ်မသိဘူး www.vakok.net (http://www.vakok.net/)[/FONT]
[FONT="]က provide လုပ်တဲ့wow server ကတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကနေ ချိတ်ဆက်ကစားလို ့ရပါတယ် IP က 203.81.162.185 ပါ။ အခုလောလောဆယ် တော ့active player ပေါင်း 2600 ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။[/FONT]
[FONT="]နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာ တွေ လဲ ကိုယ် ့မြန်မာအချင်းချင်း ကစားချင်ရင် ကစားလို ့ရပါတယ်။ အခု vakok server မှာ UK, USA , SG, Malaysia စတဲ့နိုင်ငံ တွေကနေချိတ်ဆက်ကစားနေတဲ ့player တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ vakok server က မည်သူ ့ကို မဆို ၁လ အခမဲ့ကစားခွင် ့ပေးထားပါတယ့်။[/FONT]
[FONT="]www.vakok.net (http://www.vakok.net/) ကိုသွားပြီး အကောင့် အလွယ်တကူ ရယူလို ့ရပါတယ်။ wow (3.3.3a) installer ရှိရင်[/FONT]
[FONT="]ip လေးချိန်းလိုက်ပြီး ကစားရုံ ပါဘဲခင်ဗျာ။[/FONT]
အစ်ကို wow က အင်တာနက်ရှိမှ ကစားလို့ရတာနော် ဟုတ်တယ်မလား သူက ဟို အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ warcraft လို ဆော့ရတာ မဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ်မလား:biggrin:
wow online game ဆိုရင်တော့်internet ရှိမှကစားလို ့ရမှာ ပါ။ တချို့Network Game ဆိုင်တွေ မှာ လဲ offline server ထောင်ပြီး ကစားကြတာတွေလဲရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒါနဲ့ အစ်ကို .. စကားမစပ်
WOW ကို ဆော့မယ်ဆိုရင် WoW ကို Install အရင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား? ဒီတိုင်း Naruto-Arena တို့လို Flash နဲ့ဆော့ရင်ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ? နောက်ပြီးတော့ WOW မှာ Patches တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ မတူရင်ဆော့လို့ရပါ့မလား? DotA လိုပေါ့. အဲ့ဒါလေး နားမလည်လို့ပါ.. အဟတ်
ဟုတ် တယ်မတူရင်တော့ဆော့လို ့ရမှာမဟုတ်ဘူး အခုလောလောဆယ်တော့ vakok server မှာဆော့လို ့ရပါတယ် အခုတော့ version 3.3.3ပါ
သူက ဇတ်လမ်းသွားမဟုတ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ်မလား